Vaovao - Fifanakalozan-kevitra momba ny teknolojia fanalefahana ny hafanana ao amin'ny foibe data
Ny fitomboana haingana amin'ny fananganana foibe angon-drakitra dia mitarika fitaovana bebe kokoa ao amin'ny efitranon'ny ordinatera, izay manome tontolo iainana fampangatsiahana hafanana sy hamandoana ho an'ny foibe data. Hitombo be ny fanjifàna herinaratra ao amin'ny foibe data, arahin'ny fitomboan'ny taham-pahavitrihana amin'ny rafitra fampangatsiahana, ny rafitra fitsinjarana herinaratra, ny fiakarana ary ny mpamokatra, izay hitondra fanamby lehibe amin'ny fanjifana angovo ao amin'ny foibe data. Amin'ny fotoana mampirisika ny fitsitsiana ny angovo sy ny fampihenana ny etona ny firenena iray manontolo, raha mandany an-jambany ny angovo ara-tsosialy ny foibe angona, dia tsy maintsy hisarika ny sain'ny governemanta sy ny vahoaka izany. Tsy vitan'ny hoe tsy mamporisika ny fivoaran'ny ho avy amin'ny foibe angona, fa mifanohitra amin'ny fitondran-tena ara-tsosialy ihany koa. Noho izany, ny fanjifàna angovo no lasa votoaty miahiahy indrindra amin'ny fananganana ny foibe angona. Mba hampivoarana ny foibe data dia ilaina ny manitatra hatrany ny haavony ary mampitombo ny fitaovana. Tsy azo ahena izany, fa mila hatsaraina ny tahan'ny fampiasana ny fitaovana amin'ny fampiasana azy. Ny ampahany lehibe hafa amin'ny fanjifana angovo dia ny fanaparitahana hafanana. Ny fanjifàna angovo an'ny rafitra fanamafisam-peo foibe data dia mitentina efa ho ny ampahatelon'ny fanjifana angovo an'ny foibe angona manontolo. Raha afaka manao ezaka bebe kokoa amin'izany isika, dia ho avy hatrany ny fiantraikan'ny angovo azo avy amin'ny foibe data. Noho izany, inona avy ireo teknolojia fanaparitahana hafanana ao amin'ny foibe angona ary inona ny toromarika ho an'ny fampandrosoana ho avy? Ho hita ato amin’ity lahatsoratra ity ny valiny.
Rafitra fampangatsiahana rivotra
Ny rafitra fanitarana mivantana ny rivotra dia lasa rafitra fanamafisam-peo. Ao amin'ny rafitra fampangatsiahana rivotra, ny antsasaky ny refrigerant mivezivezy faritra dia hita ao amin'ny rivotra conditioner ny angona foibe milina efitra, ary ny sisa dia hita ao amin'ny ivelany rivotra mangatsiaka condenser. Ny hafanana ao anatin'ny efitranon'ny masinina dia voatsindry any amin'ny tontolo ivelany amin'ny alàlan'ny fantsona mivezivezy amin'ny refrigerant. Ny rivotra mafana dia mamindra ny hafanana mankany amin'ny coil evaporator ary avy eo mankany amin'ny refrigerant. Ny refrigerant avo lenta sy fanerena avo lenta dia alefa any amin'ny condenser ivelany amin'ny alàlan'ny compressor ary avy eo dia mamoaka ny hafanana mankany amin'ny atmosfera ivelany. Ny fahombiazan'ny angovo azo avy amin'ny rafitra fampangatsiahana rivotra dia somary ambany, ary ny hafanana dia alehan'ny rivotra mivantana. Avy amin'ny fomba fijery mangatsiaka, ny fanjifana angovo lehibe dia avy amin'ny compressor, mpankafy an-trano ary condenser ivelany mangatsiaka. Noho ny fisehon'ny foibe afovoan'ny vondrona ivelany, rehefa mandeha ny fahavaratra rehetra ny vondrona ivelany rehetra, dia miharihary ny fivondronan'ny hafanana eo an-toerana, izay hampihena ny fahombiazan'ny vata fampangatsiahana ary hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny fampiasana. Ambonin'izany, misy fiantraikany lehibe amin'ny tontolo manodidina ny tabataban'ny unit ivelan'ny rivotra mangatsiaka, izay mora misy fiantraikany amin'ny mponina manodidina. Tsy azo raisina ny fampangatsiahana voajanahary, ary somary ambany ny fitsitsiana angovo. Na dia tsy avo aza ny fahombiazan'ny fampangatsiahana ny rafitra fampangatsiahana rivotra ary mbola avo ny fanjifana angovo, dia io no fomba fampangatsiahana be mpampiasa indrindra ao amin'ny foibe data.
Rafitra fampangatsiahana ranon-javatra
Ny rafitra fampangatsiahana rivotra dia manana ny fatiantoka tsy azo ihodivirana. Nanomboka nitodika tany amin'ny fampangatsiahana ranon-javatra ny foibem-pamokarana sasany, ary ny tena fahita indrindra dia ny rafitra fampangatsiahana rano. Ny rafitra fampangatsiahana rano dia manala ny hafanana amin'ny alàlan'ny takelaka fifanakalozana hafanana, ary milamina ny vata fampangatsiahana. Ny tilikambo fampangatsiahana ivelan'ny trano na ny cooler maina dia ilaina hanoloana condenser amin'ny fifanakalozana hafanana. Ny fampangatsiahana rano dia manafoana ny fitaovana ivelan'ny rivotra mangatsiaka, mamaha ny olan'ny tabataba ary tsy dia misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana. Ny rafitra fampangatsiahana rano dia sarotra, lafo ary sarotra ny fikojakojana, saingy afaka mahafeno ny fepetra takian'ny fampangatsiahana sy ny angovo amin'ny foibe data lehibe. Ankoatra ny fampangatsiahana rano dia misy ny fampangatsiahana menaka. Raha ampitahaina amin'ny fampangatsiahana rano, ny rafitra fampangatsiahana solika dia afaka mampihena bebe kokoa ny fanjifana angovo. Raha raisina ny rafitra fampangatsiahana solika, dia tsy misy intsony ny olana amin'ny vovoka atrehin'ny rivotra mahazatra, ary ny fanjifana angovo dia ambany kokoa. Tsy toy ny rano, ny menaka dia zavatra tsy polar, izay tsy hisy fiantraikany amin'ny circuit integrated elektronika ary tsy hanimba ny fitaovana anatiny ao amin'ny server. Na izany aza, ny rafitra fampangatsiahana ranon-javatra dia kotrokorana sy orana foana eny an-tsena, ary vitsy ny ivom-pahalalana handray an'io fomba io. Satria ny rafitra fampangatsiahana ranon-javatra, na asitrika na fomba hafa, dia mitaky filtration ny ranon-javatra mba hisorohana ny olana toy ny loto fanangonan-karena, antsanga tafahoatra sy ny fitomboana biolojika. Ho an'ny rafitra mifototra amin'ny rano, toy ireo rafitra fampangatsiahana ranon-javatra misy tilikambo fanamafisam-peo na fandrefesana etona, ny olana momba ny sediment dia mila karakaraina amin'ny fanesorana ny etona amin'ny boky iray, ary mila sarahina sy "esorina", na dia toy izany aza ny fitsaboana. mety hiteraka olana ara-tontolo iainana.
Ny rafitra fampangatsiahana evaporative na adiabatic
Ny teknolojia fampangatsiahana evaporative dia fomba iray amin'ny fampangatsiahana rivotra amin'ny fampiasana ny fihenan'ny mari-pana. Rehefa mihaona amin’ny rivotra mafana mikoriana ny rano, dia manomboka etona ka lasa entona. Ny fanaparitahana ny hafanana evaporative dia tsy mety amin'ny refrigerant manimba ny tontolo iainana, ny vidin'ny fametrahana dia ambany, ny compressor nentim-paharazana dia tsy ilaina, ny fanjifana angovo dia ambany, ary manana tombony amin'ny fitsitsiana angovo, fiarovana ny tontolo iainana, toekarena ary fanatsarana ny kalitaon'ny rivotra anatiny. . Ny cooler evaporative dia fantson-drano lehibe izay misintona rivotra mafana eo amin'ny padran-drano mando. Rehefa lasa etona ny rano ao amin'ny pad mando, dia mangatsiaka ny rivotra ary avoaka. Ny hafanana dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fikorianan'ny rivotra amin'ny cooler. Ny fampangatsiahana adiabatika dia midika fa ao anatin'ny dingan'ny fiakaran'ny rivotra adiabatika dia mihena ny tsindrin'ny rivotra miaraka amin'ny fitomboan'ny haavony, ary ny sakana rivotra dia miasa ivelany noho ny fanitarana ny volume, ka miteraka fihenan'ny hafanan'ny rivotra. Ireo fomba fampangatsiahana ireo dia mbola vaovao ho an'ny foibe data.
rafitra fampangatsiahana mihidy
Voaisy tombo-kase ny satroka radiator amin'ny rafitra fampangatsiahana mihidy ary ampiana tanky fanitarana. Nandritra ny fandidiana, ny etona coolant miditra ao amin'ny fanitarana tanky ary mikoriana miverina any amin'ny radiatera aorian'ny fampangatsiahana, izay afaka misakana be dia be ny etona fahaverezan'ny coolant sy hanatsara ny mari-pana mangotraka coolant. Ny rafitra fampangatsiahana mihidy dia afaka miantoka fa ny motera dia tsy mila rano mangatsiaka mandritra ny 1 ~ 2 taona. Amin'ny fampiasana dia tsy maintsy azo antoka ny famehezana mba hahazoana ny vokany. Tsy azo fenoina ny coolant ao amin'ny tank fanitarana, mamela toerana ho an'ny fanitarana. Aorian'ny fampiasana roa taona, esory sy sivana, ary tohizo ny fampiasana aorian'ny fanitsiana ny fananganana sy ny toerana mangatsiaka. Midika izany fa ny tsy fahampian'ny rivotra dia mora miteraka hafanana be eo an-toerana. Ny fampangatsiahana mihidy dia matetika miaraka amin'ny fampangatsiahana rano na fampangatsiahana ranon-javatra. Ny rafitra fampangatsiahana rano dia azo atao koa ho rafitra mihidy, izay afaka manala ny hafanana amin'ny fomba mahomby kokoa ary manatsara ny fahombiazan'ny vata fampangatsiahana.
Ho fanampin'ireo fomba fanalefahana ny hafanana nampidirina etsy ambony, dia misy fomba fanalefahana hafanana mahafinaritra maro, ny sasany amin'izy ireo dia nampiharina mihitsy aza. Ohatra, ny fanaparitahana hafanana voajanahary dia raisina mba hananganana foibe angona any amin'ny firenena Nordic mangatsiaka na any amin'ny fanambanin'ny ranomasina, ary ny "mangatsiaka lalina" dia ampiasaina mba hampangatsiahana ny fitaovana ao amin'ny foibe data. Tahaka ny foiben'ny data an'ny Facebook any Islandy, ny foiben'ny data an'ny Microsoft any amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Ankoatra izany, ny rano mangatsiaka dia tsy afaka mampiasa rano mahazatra. Ny rano an-dranomasina, ny rano maloto ao an-trano ary na ny rano mafana aza dia azo ampiasaina hanafanana ny foibe data. Ohatra, mampiasa ny ranon'ny Farihy Qiandao i Alibaba mba hialana amin'ny hafanana. Google dia nanangana foibe angona mampiasa rano an-dranomasina amin'ny fanalefahana ny hafanana any hamina, Finlande. EBay dia nanangana ny foibe angonany any an'efitra. Manodidina ny 46 degre Celsius eo ho eo ny mari-pana any ivelany any amin'ny foibe data.
Ny etsy ambony dia mampiditra ny teknolojia mahazatra amin'ny fanaparitahana ny hafanana amin'ny foibe data, ny sasany amin'izy ireo dia mbola ao anatin'ny fanatsarana mitohy ary mbola teknolojia laboratoara. Ho an'ny fironana mangatsiaka amin'ny ho avy amin'ny foibe angon-drakitra, ankoatry ny foibe informatika avo lenta sy ivontoerana data hafa mifototra amin'ny Internet, ny ankamaroan'ny foibe angon-drakitra dia hifindra any amin'ny toerana misy vidiny ambany sy ambany kokoa ny vidin'ny herinaratra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia fampangatsiahana mandroso kokoa, dia hihena bebe kokoa ny vidin'ny fampandehanana sy fikojakojana ny ivom-pamokarana ary hihatsara ny fahombiazan'ny angovo.